Xog: Qaabkee Fahad Yaasiin looga furdaamiyay xanibaadii Jabuuti? – Soomaali 24 Media Network
Posted on September 19, 2021 Leave a Comment on Xog: Qaabkee Fahad Yaasiin looga furdaamiyay xanibaadii Jabuuti?
Xogo isdaba joog ah ayaa ka soo baxaya qaabkii Fahad Yaasiin maalin kahor loogu xanibay Jabuuti, iyo hanaanka loo maray in dib loo fasaxo.
Ilo wareedyo xagga sirdoonka ah ayaa saacihii u danbeeyay warbaahinta la wadaagay xog sheegeysa in taliyaha dabagalka ee NISA Korneel Cabdullahi Daahir oo Cabdullahi Dheere loo yaqaan uu ku luglahaa qaabkii Jabuuti looga furdaamiyay booskiisii hore.
Taliyaha dabagalka oo la saf ahaa maalmihii lasoo dhaafey garabka RW Rooble ayaa lasheegey in maalintii shaley uu u tafaxeeytay sidii uu u sii deyn lahaa Saaxiibkiisii hore, waxaana durba xanibaada Fahad soo fara geliyey Xafiiska CIA da ee dalka jabuuti.
Rooble ayaa la sheegay in uu dhowr jeer isku dayay in taliyaha dabagalka NISA ku qanciyo in uu faraha kala baxo arinta Fahad hase ahaatee Cabdullahi Dheere ayaa ku andacoodey in ay ceeb kutahay shaqadiisa dagaalka, Rooblana ku ekaado siyaasad.
Waxaa sarkaalkan oo lagu tiriyo inuu kamid yahay xubnaha CIA-da Maraykanka Afrika u qaabilsan uu fududeeyay in diyaaradii Fahad uu la socday ugu danbeyn loo fasaxo in ay ku laabtaan halkii ay safarkooda ka soo bilaabeen ee Turkiga.
Ilaha xogtan soo shaac bixiyay waxay tilmaameen in wada hadal dhex maray saraakiil Maraykan ah oo Jabuuti jooga iyo Taliyaha dabagalka NISA, ugu danbeyn lagu guuleyatay in xarigga intaa ku ekaado.
Col. Cabdullahi Dheere ayaa lasoo warinayaa in waxbadan ka ogyahay kiiska Ikraan Tahliil waxaana lala xiriiriyaa sarkaalkan in uu si dhow ula socdo dhaq dhaqaayada Kooxda Nabadiidka ah ee Alshabaab.
Sidoo kale shaqsiyaad si dhaw u yaqaana taliyaha dabagalka iyo xubno kamid ah mucaaradka Soomaaliya ayaa sheegay in teliyahu safaro qarsoodi ah ku tago deegaanada ay ka arimiyaan Kooxda Alshabaab, labo todobaad kahor ayaa lasheegey in kulan toos ah la qaatey xubno kamid ah hogaanka Shabaab deegaanka Arabow oo u dhaw magaalada Bu’aake ee Jubada dhexe, isagoo ka duuley garoonka no.50 kulanka ayaa lasheegey in uu qaatey mudo kabadan 3 saacadood waxaana xiligaas lajarey dhamaan isgaarsiinta gobolada shabeelaha hoose iyo jubada dhexe, sida xubnaha xogtan bixiyay ay hadalka u dhigeen.
Jahwareer amni iyo mid siyaasadeed oo halkii ugu xumeyd gaaray ayaa ka taagan Soomaaliya, waxaana kiiska Ikraan Tahliil mudada la isku heysto sii kala fogaaday saaxiibo ay danta siyaasadda horay u mideysay.
Fahad oo ku awood badnaa dowladda iyo Farmaajo ayaa wajahaya culeysyo, halka Rooble oo maalmahan ku sitay cayaarta uu isaguna hadda dhexda ka fadhiyo xaalad u baahan xeeladeysi.
← Xog- Sababta ay Shabaab isaga fogeeyeen dilka Ikraan Tahliil
Fahad Yaasiin oo dalacsiiyay Sarkaalkii ka furdaamiyay xanibaadii Jabuuti →